I Etazonia ny rafi-pianarana Vaovao momba ny Etazonia ny rafi-pianarana nandritra ny taom-pianarana - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Araka ny hitanao izao, amin'ny zava-misy, ny rafi-pianarana STATUNITENSEInona ambaratonga, mandra-pahoviana no kilasy farany, ary tsy mitovy ny zavatra rafi-pianarana. Any amin'ny FIRENENA sasany, dia misy-bahoaka ary sekoly tsy miankina, ary koa ny mety hisian'ny karama ny lesona ao an-trano. Amin ny fitsipika, izany dia terena, fa mety ho karazany arakaraka ny faritra. Satria ny fanjakana tsirairay manapa-kevitra ny fomba be dia be ny teti-bola tokony omena ny fampianarana ny underachieving, misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny kalitaon'ny fanabeazana. Ny taom-pianarana ity noho ny antony roa, izay mikoriana avy amin'ny volana aogositra hatramin'ny jona. Ao amin'ny vanin-taona mafana, ny mpianatra mihoatra ny roa volana ny fialan-tsasatra. Tokana ny adidy ao amin'ny sekolim-panjakana Etazonia no miavaka avy ny fitsipiky ny sekoly tsy miankina, tsy ny fitsipika. Matetika maharitra avy amin'ny sekoly iray andro ny ora maro. Avy eo - ary indraindray teo aloha, fa misy maro hafa ny tolo-kevitra eo amin'ny sehatry ny fanatanjahan-tena, ny zavakanto, ny kolontsaina, sns. Alemaina sekoly ambaratonga fototra, izany hoe, amin'ny ambaratonga voalohany (na kilonga) sekoly any Etazonia. Ny fanatrehana ny mpianatra, arakaraky ny faritra na ny efa-taona, avy eo ny roa taona ao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa (na Junior high school)ny fianarana hatramin'ny farany ao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, izay matetika taorian'ny fianarany tany amin'ny lycée. Kilasy, rehefa tapitra ny sakafo, na ny mifamadika mivantana ny sekoly ambony rehefa afaka efa-taona ny sekoly fanabeazana fototra.
Avy any Alemaina mba USA, tsy dia fanta-daza Hauptschulen fizarazarana ny ambaratonga faharoa amin'ny sekoly ambaratonga II, Tena, an-Tsekoly na ny Sekoly Ambony.
Ao amin'ny sekoly ambaratonga rehetra ny mpianatra hianatra, na inona na inona ny fomba samy hafa ny haavon'ny. Ny fahasamihafana ara-akademika ny zava-bita dia entanina manokana ny mamporisika ny fananganana ny malemy kokoa ireo fepetra ireo mpianatra mikatsaka ny manonitra. Ankoatry ny, misy matetika ny vondrona isan-karazany sy ny antokony ho an'ny mpianatra isan-karazany ny sehatra. Ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, misy isan-karazany modely ny fanabeazana fototra. Fototra fanabeazana any amin'ny ambaratonga voalohany, misimisy na fohifohy ny ela, mety ho arahina an-tsekoly na any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Taorian'ny fahavitany ny anao afaka hianatra any amin'ny Oniversite na ny Oniversite. Efa voatanisa efatra izay azo atao ny sekoly modely ho anao. Mbola tsy misy mazava ny fahasamihafana misy eo amin'ny vahoaka sy ny sekoly tsy miankina. Ny ankamaroan ny fotoana, tahaka ny any Alemaina, izy ireo nanatrika sekolim-panjakana. Satria raha toa ka ireo sekoly misy ary ara-bola amin'ny volan'ny vahoaka mpandoa hetra.
Sekoly tsy miankina, amin'ny lafiny iray hafa, dia tokony ho naloan'ny fianakaviana.
Ny saram-pianarana ity karazana sekoly dia tena avo, satria raha tsy amin'ny alalan'ny saram-pianarana sy ny fiahiana ny vola, ka na dia ny mpianatra dia afaka manatrika ny sekoly toy izany. Ny mari-pahaizana azo avy amin'ny sekolim-bahoaka dia mety ho azo amin'ny feno-tsekoly, any Amerika-Sekoly Ambony iray Diploma, ho fangatahana fidirana any amin'ny Oniversite na ny Oniversite. Na izany aza, ny mari-pahaizana azo ny ny sekoly tsy miankina fa taxidermists, dia zava-dehibe kokoa, ary toy izany koa ny sekoly ambony diplaoma na fampianarana ambony sy ny diplaoma. Izany dia mihatra ihany koa amin'ny olona tsirairay, satria misy maro ny zavatra ao amin'ny fanomanana ny sekoly. Ny iray hafa mety Heim Schelling, izay mpianatra mahazo ny vaovao ao an-trano. Izany mba ho azo atao, ohatra, noho ny finoany ara-pivavahana na noho ny toe-javatra manokana sy ny zavatra ilaina iray manokana tranga. Vitsy dia vitsy dia manana zo io endriky ny vahaolana, rehefa amin'ny lesona ny Hamsalekha koa ny tena mifanohitra.
Ireo sy ireo olana hafa dia azo hazavaina etsy ambany
Ao amin'ny UNITED STATES, dia ny tahan'ny fa tsy ny isa sy ny taratasy. Efa nandalo izany mandra-manana araka ny tokony ho izy dia nanapa-kevitra mihoatra ny iray asa na ny fanakatonana. Ny zava-drehetra avy amin'ny fotsiny ny antsasaky ny"E", ary"F"ho an'ny underestimating sy izay midika fa tsy mandalo. Ianao ihany no manana ny tsy mety ny asa, tsy mbola manana, ny Amerikana, ny iray-on-iray, ka"tena tsara". Rehefa afaka izany, dia handeha ny alalan ny dingana ny folo alaina fa efa nanapa-kevitra marina, dia hahazo B, izay ao Alemaina roa, ka tsara"nahafa-po"dia nahafaty raha tena nanao izany ary mahazo ny C. dia mbola nihoatra ianao, raha toa ianao manana ny F miaraka amin'ny momba ny mahazo fa ny anarana"genug".
Mazava ho azy, rehetra vatom-pifidianana ihany koa dia nentina avy amin'ny plus na miiba fahasamihafana.
Mahazatra ny Amerikana sarimihetsika avy any aminareo amin'ny fanamiana, raha ilaina, amin'ny olon-tsotra ny akanjo. Saingy raha ny marina, ny sekoly mahazatra ny fanamiana dia tsy misy intsony noho izany fahita any amin'ny sekoly Amerikana. Rehefa ny adidy mba hanao izany, ary dia hampihena ny naoty sy ny tsy miankina ny sekoly ambony. Amin'ny Ankapobeny, ny adidy mba hanao fanamiana miteraka heviny lehibe kokoa ny an'ny fiaraha-monina sy ny fialana amin'ny fifaninanana. Noho izany, na dia eo aza ny tsy fahita firy hatrany endrika, ny fitafy dia matetika nampidirina amin'izao fotoana izao.
Fitafy, dia misy saika ny rehetra ny sekoly ambaratonga faharoa, ary tena hentitra maso.
Ohatra, ny zipo lavany voalaza ho an'ny sekoly tsirairay dia midika fa tsy afaka manao akanjo na tery ny akanjo. Piercings sy ny tombokavatsa ihany koa voarara. Ny sekoly no tena tsara nanompo ny rafi-pianarana amin'ny alalan'ny lalàna. Ny mahazatra mavo ny sekoly dia fiara fitateram-bahoaka izay mandeha avy mianatra isan'andro tamin'ny andro kilasy ho an'ny ankizy. Maro ireo fiara mijanona, sy any amin'ny faritra ambanivohitra mpianatra ihany koa ny avy mivantana avy any an-trano. Tokony, fa mba lavitra fa dia miaina any ambanivohitra fa na dia fiara fitateram-bahoaka tsy miasa, ho maro ny fianakaviana no mikarakara ny fitaterana ho any an-tsekoly. Ny fiara fitateram-bahoaka dia matetika tena tsara sy azo antoka, fitaovana amin'ny fiarovana ny fakan-tsary, fanampiny fanairana sy ny fiarovana hafa rafitra. Tany Amerika, ny sekoly, dia maro sy tena hentitra ny fiarovana ny fepetra sy ny fitsipika. Ohatra, ianao ihany no afaka mamindra ny manodidina ny toeram-pianarana mandritra ny fialan-tsasatra amin'ny fahazoan-dalana - Hall Nitranga. Ny hevitra dia ny hoe izay namaky ny momba manokana fitaovam-piadiana any Amerika no tena mitovy amin'ny zavatra vakinao ao Italia. Matetika mandritra ny lesona, ny fidirana ao amin'ny sekoly no mikatona, ary amin'ny toe-javatra hafa voara-maso tanteraka. Ao Scambi sekoly ambony ianao dia tadiavo ny rafitra an-tsekoly STATUNITENSE, ary ny fifaliana ny fiainana ihany koa ny mafy fantatra. Miaina ao anatin'ny tenanao, toy ny any ETAZONIA, ho any an-tsekoly sy hiaina ny fiainana. Ny"Senior taona"fandaharana tao ETAZONIA dia manome fahafahana mba hahafantatra ny firenena ny fahafahana tsara kokoa. Ianao dia manana vaovao fivoriana ho an'ny kolontsaina, ny fianakaviana, ny namana, ny sekoly sy ny Fialam-boly. Tao ny feno olona misomebiseby ny new York, ao ny tsy misy farany expanses ny Nebraska, na ny marimarina kokoa, ny onja ny Zavatra Nosy - na aiza na aiza ianao no voafitaka, fa ny fifanakalozana mpianatra ao amin'ny UNITED STATES. Na aiza na aiza, ny fotoana ny fiainana dia ny miandry anao. Ny safidy ny lohahevitra, tahaka ny fantatrareo avy any Alemaina, dia lehibe kokoa. Misy maro takiana foto-kevitra, toy ny anglisy, STATUNITENSE, tantara, na matematika, fa hafa noho izany, ny isan-karazany ny foto-kevitra no tsy mitovy amin'ny antsika. Ao amin'ny sekoly sasany, ny mpianatra mandeha amin'ny taranja azo isafidianana. Matetika, ny antokony dia mizara ho fahasarotana ambaratonga (mafy, ny mpanelanelana amin'ny tontolo sy mora), ka ny mpianatra rehetra, arakaraka ny fahaizany ho nampahafantarina. Maro miasa amin'ny ireo vondrona ara-kolontsaina ny vondrona asa ary, toy ny fitsipika, ny tena-karazany ny hetsika ara-panatanjahantena hameno ny mahazatra kilasy. Toy izany soso-kevitra dia matetika vita taloha na taorian'ny tsy tapaka ny fampianarana. Sekoly ambaratonga faharoa dia ny tapany farany ny rafi-pampianarana ao amin'ny YSLU.
Matetika ireo mpianatra mianatra eto.
Niakatra ho any. kilasy, indraindray mivantana avy.
Kilasy voalohany, avy eo ny roa taona, Junior high school.
Ny haavon'ny American sekoly ambony, toy ny hafa rehetra ny sekoly misy, dia samy hafa mihitsy, satria ny fanabeazana no zava-dehibe ho an'ny Firenena. Noho izany, ny kalitaon'ny fampianarana miovaova arakaraka ny teti-bola. Izany no mampiavaka ny HANY FIRENENA, izay antsoina hoe sekoly fanahy. Izany dia ahitana ny fiofanana, ny hafanam-po, ny fanoloran-tena sy ny vondrom-piarahamonina iray matanjaka.
Ny toetra mampiavaka ny sasany alemana mpianatra tsy fanta-daza.
Raha toa ka manana American sekoly ambony, dia afaka misoratra anarana manokana io fanahy, izay mazava ho azy fa miovaova be, angamba ny"trondro"izany.
Order ny sekoly ambony fifanakalozana Catalog maimaim-poana sy tsy misy adidy.
Misy ireo fikambanana maro manolotra ihany koa ny fandaharana hafa, toy izany ho toy ny"Asa sy fitetezan-tany","asa an-tsitrapo","AU-peer","ny Fambolena, ny asa", sns. Taona any ivelany"dia tetikasa iray"avy any Ivelany Fotoana fandraisana andraikitra"sy mahaleotena ny vavahadin-tserasera manokana ao amin'ny lohahevitra ny taona any ivelany, fifanakalozana, isan-taona ny fifanakalozana sy ny fianarana any ivelany. Ny malaza indrindra avy any ivelany taona dia ny United States, Aostralia, Angletera, Kanada, ary Nouvelle-Zélande. Ankoatra ny teny anglisy taona any ivelany - teny espaniola fianarana andro sy espaniola sabatika, fa bebe kokoa ny malaza. Laharam-pahamehana ny fironana ireo dia manomboka amin'ny asabotsy fialan-tsasatra ho toy ny lohahevitra amin'ny vavahadin-tserasera. Copyright (c) ny Zavatra anaram-boninahitra lahatsoratra Momba antsika ny Fifandraisana vaovao pirinty Mpiara-miasa pirinty Tahirin-kevitra.
Wuhan Dating isixeko: unako ukwenza nokuba ufuna njengoko ixesha elide
izay mba hihaona ny tovovavy Ny fiarahana amin'ny chat mampiaraka toerana ho an'ny lehibe sy ny fifandraisana ny lahatsary amin'ny chat velona ny Fiarahana video Mampiaraka online no fisoratana anarana maimaim-poana ny firaisana ara-nofo Niaraka watch video chat Mampiaraka manerana izao tontolo izao ny lahatsary amin'ny chat roulette an-tserasera tsy misy fisoratana anarana hihaona tsy misy fisoratana anarana amin'ny chat roulette amin'ny ankizivavy tsy misy fisoratana anarana